Chelsea oo talaabo u qaadday saxiixay Robert Lewandowski…(Intee wax u marayaan Blues?) - Wardeeq 24 TV Chelsea oo talaabo u qaadday saxiixay Robert Lewandowski…(Intee wax u marayaan Blues?) Wardeeq 24 TV
Home Sports-ka Chelsea oo talaabo u qaadday saxiixay Robert Lewandowski…(Intee wax u marayaan Blues?)
Chelsea oo talaabo u qaadday saxiixay Robert Lewandowski…(Intee wax u marayaan Blues?)
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa dadaalkeeda isugu geeyneysa sidii ay xagaagan ku heli lahayd saxiix wax ku ool ah iyadoo haatan xoogga saareysa saxiixa laacibka kooxda Bayern Munich ee Robert Lewandowski xagaagan.
Iyadoo Thomas Tuchel baadi goob ba’an uu ugu jiro saxiixa weeraryahan halis ah, ayay Blues xiriir la sameysay Lewy si ay kaga dhaadhiciso inuu usoo dhaqaaqo London.
Kabtanka xulka qaranka Polan ayaa noqday weeraryahankii ugu dambeeyay ee lala xiriiriyay Chelsea kaddib bandhigga liita ee Timo Werner, waxaana horraan lala xiriiriyay xiddiga Inter Milan ee Romelu Lukaku iyo Borussia Dortmund laacibkeeda Erling Haaland.
Si kastaba ha ahaatee, warsidaha Sky Sports Germany ayaa sheegay inay kooxda Ingiriiska ka dhisan u dhowaaqday Lewandowski iyagoo ugu yeeray inuu dhankooda kusoo biiro, hase ahaatee, waxaanan jirin wada hadallo toos ah oo dhex maray labada dhinac.
Wargeyska ayaa sidoo kale intaas ku daray inay Chelsea wajihi doonto loollan adag maadaama uu laacibkan diiradda u saaran yahay kooxaha Paris Saint-Germain iyo Barcelona.
32-sano jirkan ayaa dhaliyay 47 gool kaddib 39 ciyaarood oo uu u saftay Bavarians xilli ciyaareedkan waxaana uu ku jiraa qaab ciyaareedkiisii ugu sarreeyay taasoo keentay inay xiiso u muujiyaan qaar ka mid ah kooxaha ugu tunka weyn qaaradda Yurub.
Previous articleTaliska Booliska Jowhar oo soo bandhigay hub & Maxaabiis
Next articleSergio Ramos iyo Nacho oo shaki laga gelinayo Euro 2020…(Ma dhici doontaa in safka qaranka Spain ee Euro 2020 laga waayo xiddiga u ciyaara Real Madrid?)